Poidełko → Tovo-drano • Elkay • Mpisotro • Loharanon'ny rano fisotro • Zdroje
Jiro LED UV amin'ny fanamasinana rano
Ny fifehezana valy
Ho an'ny endrika mpamorona
Water Point ho solontena tokana Elkay ao Polonina dia manolotra tavoahangy rano sy loharano rano fisotroan-drano fisotroan-drano sy fisotroan-drano fisotroan-drano, ho an'ny sekoly sy oniversite, tranobe birao, foibe fivarotana, zavamaniry famokarana, klioba fanatanjahantena, trano fanatanjahantena, seranam-piaramanidina, seranam-piaramanidina, toeram-pitsaboana, efitrano fialam-boly, sinema, birao fanjakana, zaridainam-panjakana, kianja filalaovana, promenades, sns.
Ampidino ny katalaogy >>
Ny orinasa Elkay dia mitana foibe any Downers Grove, Illinois, miaraka amina trano fanamboarana any Etazonia, ary ny hetsika iraisam-pirenena any Sina sy Mexico manompo ny tsena eran-tany.
Lovia fisotroana indroa - modely LZS8WSS2K
Ity modely ity dia fitambaran-java-feno feno fitoeran-drano sy mpamatsy rano amin'ny famonoana hetaheta mivantana nefa tsy mampiasa vilia fanampiny. Vahaolana mety ho an'ny sekoly, oniversite, fotom-panjakana izany, anisan'izany ireo klioba fiasa, birao, hopitaly.
Mandritra izany fotoana izany dia manolotra filozofia ekolojia vaovao amin'ny alàlan'ny fampahafantarana ireo mpampiasa ny habetsaky ny tavoahangy plastika voatahiry noho ny fanjifana rano.
Green Tricker - Mampiseho ny isan'ny tavoahangy plastika voatahiry.
Mpanara-maso ny sivana (ireo modely misy afa-tsy ny sivana) - Green, mavo ary ny mena mena dia manondro ny toe-javatra misy ny sivana.
Stream Laminar - nozzle fenoina miverina - miantoka ny malefaka tsara sy ny spatter kely
rano, 4-6 l / min.
Tontosa mora azo - Miaro amin'ny faharatran'ny mpampiasa ny Flexi-Guard. Misy coating miaro amin'ny fitomboan'ny microorganisma.
Fanamafisana sensor elektronika - Fiaraha-mientana tsy misy fifandraisana sy fanadiovana miaraka amina fanakatonana mandeha ho azy aorian'ny fanadinana 20 segondra.
Tonga lafatra ho an'ny:
Sekoly sy oniversite
Fitaovana ho an'ny daholobe
Klioba Fitness sy ny maro hafa
Modely LZS8WSS2K - ity fitaovana ity dia vita amin'ny fitaovana vita amin'ny 60%, ary natao ho an'ny olona sembana, ankizy sy lehibe amin'ny seza misy kodiarana.
Ny fampisehoana manokana miaraka amin'ny mpifaninana iray dia mampahafantatra ny mpampiasa ny isan'ny tavoahangy voavonjy, ka arakaraka ny fironana ekolojika ankehitriny.
Vita amin'ny sivana avo lenta (lead, chlorine, solides content ary hanatsara ny tsiro sy ny fofona) ampy rano 12.000 litatra sy vata fampangatsiahana.
Rehefa ampiasaina amin'ny andrim-pianarana dia azo ampiana amin'ny spout manokana sy mahomby ary mora ampiasaina, izay mora miaro ny ankizy amin'ny ratra. Ny dispenser amin'ny famenoana tavoahangy dia natetika ho an'ny sensor iray.
* Azo atao ny manao logotype misy lovia aluminium.
Zava-pisotro - modely EZS8S
Toy izany koa ilay modely etsy ambony, miaraka amina vata fampangatsiahana izy io, sivana misy kalitao avo lenta (firaka, klôro, manome votoaty ary hanatsara ny tsiro sy fofona) ampy rano 12.000 litatra.
Rehefa ampiasaina amin'ny andrim-pianarana dia azo ampiana amin'ny spout manokana sy mahomby ary mora ampiasaina, izay mora miaro ny ankizy amin'ny ratra.
Mety hampiasaina amin'ny olona sembana, zaza ary lehibe amin'ny seza misy kodiarana.
Sotroina - apetraka LZSTL8WSS2K
Fitaovana andian-tsambo roa izay ahitana ireo modely atolotra etsy ambony ho an'ny olon-dehibe sy ny ankizy.
Ny dispenser amin'ny famenoana tavoahangy dia natetika ho an'ny sensor iray.
Fitambaran-tavoahangy feno fitoerana vita amin'ny rindrina
• navitran'ny bokotra iray
• counter counter Green Tricker
• esorina ny rafi-tatatra sy ny mombamomba azy
rano sisa mijanona ao amin'ny fampitaovana
• ampiasaina mba hamenoana: tavoahangy rano, tavoahangy, lamba
• natao hametrahana amin'ny toerana sarotra
fidirana amin'ny hery mains
• Fampisehoana Green Tricker ampiasain'ny bateria 3AA
• mety amin'ny birao sy ny toeram-piasana
• navitran'ny sensor tsy mifandray
• fahaizana feno famenoana 4,5 l / min
• fanakatonana mandeha ho azy taorian'ny 20 segondra tsy fahatokisana
Sotro fisotro vita amin'ny vy vita amin'ny vy. Ny endri-tsoratra manokana an'ny lovia dia mampihena ny fizarazarana. Mpikambana mihetsika tsy mahomby izay mahatohitra ny fampiasana mavesatra ary tsy mitaky fikosehana na fisolokiana. Fanitsiana ny haavon'ny jet amin'ny alàlan'ny loaka manokana eo amin'ny bokotra, tsy itokisana azy ireo.
Sotro fisotro vita amin'ny vy vita amin'ny vy. Ny endri-tsoratra manokana an'ny lovia dia mampihena ny famoretana. Mpikambana mihetsika tsy mahomby izay mahatohitra ny fampiasana mavesatra ary tsy mitaky fikosehana na fisolokiana. Fanitsiana ny haavon'ny jet amin'ny alàlan'ny fanokafana manokana eo amin'ny bokotra tsy mila misaraka Ny takelaka fisotroana dia fitaovana rindrina amin'ny rindrina miaro.
Mpisotro - modely fanoherana ny faharatsiana
Andiana modely miaraka amina endriny matevina vita amin'ny vy vy matevina satro 2 mm matevina. Nofatorana varahina tsy misy firaka, mateza vita amin'ny varahina miorina amin'ny chrome.
Visa, mijanona, tsy misy fanodinana amin'ny bokotra fanokafana ny haavon'ny jet.
Mahatanty entana matevina 250 kg. Fankatoavana ny olona sembana. Tonga lafatra ho an'ny sekoly, ivontoerana fivarotana, fikolokoloana ary sampam-pampianarana.
Tobim-pamokarana tavoahangy feno rano mifangaro amin'ny vovoka misy tavoahangy rano. Azo ampiasaina amin'ny sivana sy ny hatsiaka.
Ny counter counter Green Tricker dia mampiseho fa feno tavoahangy plastika tsy lasa fako sy miaro ny tontolo iainana.
Andiana modely miaraka amina endriny matevina vita amin'ny vy vy matevina satro 2 mm matevina.
Namboarina tamin`ny spra plastika tsy misy firaka, mateza vita amin'ny varahina miorina chrome. Vandalovan-tena, manidy tena, bokotra tsy fanodikodinana misy fanokafana hahafahana mifehy ny haavon'ny jet.
Mpisotro Swirlflo® - endrika maoderina
Ny tena mandroso indrindra amin'ny resaka fisotroan-doko avy amin'ny andian-dahatsoratra SWIRFLO, vita amin'ny vy vy avo lenta, misy rindrina rindrina ary bokotra miverina amin'ny lohataona lehibe.
Fankatoavana ny olona sembana. Natokana ho an'ny tobim-pahasalamana, seranam-piaramanidina, seranam-piangonana ary ireo trano sy birao sy birao hafa.
Tobim-pamokarana tavoahangy feno rano miaraka amin'ny mpamatsy SWIRFLO maoderina vita amin'ny vy vy avo lenta, misy sivana, tsy misy hatsiaka, misy rindrina rindrina ary bokotra miverina amin'ny lohataona lehibe.
Ny counter counter Green Tricker dia mampiseho fa feno tavoahangy plastika tsy lasa fako sy miaro ny tontolo iainana. Fankatoavana ny olona sembana.
Natokana ho an'ny tobim-pahasalamana, seranam-piaramanidina, seranam-piangonana ary ireo trano sy birao sy birao hafa.
Sokajin-tsofina malefaka® - endrika maoderina
Rindrambaona roa misotro toaka ho an'ny ankizy sy olon-dehibe, vita amin'ny vy vy avo lenta, misy takelaka fiarovana miaro amin'ny endrika aesthetic sy endrika maoderina.
Fankatoavana ny olona sembana. Tonga lafatra ho an'ny trano sy seranam-piaramanidina ary seranam-piaramanidina
Mpisotro vita amin'ny vy vy avo lenta, misy sivana sy mangatsiatsiaka kokoa, miaraka amin'ny rindrina rindrina miaro amin'ny endrika aesthetic sy endrika maoderina.
Sotroina sy loharano rano - ivelany
Tobim-pamokarana tavoahangy sy fisotroana - ENDURA
Tobin-jiro vita amin'ny rano amin'ny rindrina, porofo madiodio, miaraka amina rafitra matevina, vita amin'ny vy vita amin'ny hatsiaka, 4,5 mm matevina.
Fofona vovony, miovaova ny toetrandro. Bokotra eo anoloana mora ampiasaina miaraka amin'ny valin-kafe manidy.
Mitsimoka amin'ny alàlan'ny fihenan'ny rihitra misy rano 4,5 l / min. Tonga lafatra ho an'ny faritra fialamboly.
Voamarina ho an'ireo sembana. Azo alaina ao amin'ny dikan-tantaran-dronono izany - ho voaloa ambonin'izay ny valiny.
Tantsaha tavoahangy misy rano miaraka amina mpisotro sy lovia ho an'ny alika, porofon'ny vandalà, miaraka amina rafitra matevina, vita amin'ny vy vita amin'ny hatsiaka, 4,5mm matevina.
Vilia fisotroana ivelan'ny ivelany - voajanahary mitambatra
Lovia fisotro iray vita amin'ny agregat voajanahary manamafy - beton-drindrina vibro. Tena mahatohitra ny toetrandro. Ny singa hafa dia vita amin'ny vy vy avo lenta. Spand-tahan-doza Namboarina ho an'ireo sembana. Azo alaina ao amin'ny dikan-tantaran-dronono izany - karama fanampiny no voaloa.
Mpisotro pedestal vita amin'ny agregat voajanahary manamafy - vibro beton. Tena mahatohitra ny toetrandro. Ny singa hafa dia vita amin'ny vy vy avo lenta. Spand-tahan-doza Azo alaina ao amin'ny dikan-tantaran-dronono izany - ho voaloa ambonin'izay ny valiny.
5 / 5 ( 42 vato )
rano madiorano maimaimpoanaloharanoloharano misotro ranoloharano tanànapitnikpitnikimpitondra ranompisotrompimamo mizaramisotro zava-mahadomelinampisotro zava-metalympamokatramisotro anatinymisotro ivelanympisotrompisotro sekolymivantana avy amin'ny paompyrano ho an'ny sekolypaompy ranosotro fisotro ranolohataonaloharano misotro ranolohataonarano fisotro
Jereo ireo vokatra hafa:
Ny valan-javaboary sy trano fanatanjahan-tena
Famolavolana sy fampiharana: pixelsperfect.pl - tranonkala Poznań